Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Iindaba Eziphambili zaseHawaii » IHawaii ithi ndlela ntle kwi-COVID-19
Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba Eziphambili zaseHawaii • Iindaba zeMpilo • Icandelo lokungenisa izihambi • Iihotele kunye neeholide • iindaba • abantu • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • Iindaba zase-USA ezaphulayo • I-WTN
UJohn De Fries, umongameli kunye ne-CEO yeGunya lezoKhenketho eHawaii
I-WIth iRhuluneli yaseHawaii i-Ige ibhengeza ukuphakanyiswa kwezithintelo ezininzi zikaxakeka ukusuka ngoDisemba, imaski egcinayo kunye nemithetho ekhuselekileyo yokuhamba iya kuhlala.
Ishishini leentlanganiso liza kuvunyelwa ukuba liphinde livulwe.
Isigqibo malunga nezithintelo siyakusuka kuRhulumente siye kwiingingqi zeSiqithi.
Ukulandela umkhwa wesizwe eUnited States, i Aloha Ilizwe laseHawaii likwabhengeza ukuba i-COVID-19 ayisesiso isoyikiso esinjalo.
Ukhenketho kufuneka luqhube kwaye lwandise. Lo mkhwa wokuqala weshishini wamkela iindaba, ngokukodwa kwi-States MICE ishishini, elifana neehotele ezineendawo zokuhlangana, iziko lendibano, kunye neendawo zeentlanganiso.
Ngelixa ezi ziindaba ezimnandi ngoko nangoko kukhenketho, abanye banexhala lokuba ingaphinda ibuye, ngaphandle kwengxelo ngabasemagunyeni, imithetho yokuvula kwakhona iya kuhlala ikhona. Urhulumente unethemba lokuba esi siqinisekiso siya kubuyisela ukuzithemba kweli candelo.
IHawaii ibango lokuba inerekhodi eliphezulu labantu abagonyiweyo ngelixa bejonge ukuba uninzi lwabo bagonyiweyo kuRhulumente abahlala kwenye indawo (basekhaya okanye phesheya) bafumene udubulo eHawaii kwaye ngoku babalwa phakathi kwe-1.4 yezigidi zabahlali baseHawaii- yintoni engeyonyani .
eTurboNews ubuze lo mbuzo amaxesha amaninzi, kwaye impendulo ecacileyo iye yaphetshwa yiRhuluneli, oosodolophu, kunye ne-HTA.
Nangona izinga lokufa lingakhange lithambe ngaphandle kwesitofu sokugonya, kwaye amazinga osulelo eqhubeka ngokuphakathi, iHawaii ilandela umkhwa welizwe wokujonga la manani ukubuyisela ishishini.
Hawaii Irhuluneli uDavid Ige namhlanje ujoyine ooSodolophu baseHawaii ekubhengezeni ukushenxiswa kwezithintelo ezininzi zobhubhane nge-1 kaDisemba, ebonisa ukuba iHawaii iphinde yavulelwa ishishini.
Oosodolophu beSiqithi seSiqithi baya kuba nakho ukuseta eyabo imithetho kaxakeka ngaphandle kokufumana imvume yangaphambili kwiRhuluneli
Le migaqo yokhuseleko ilandelayo iya kuhlala.
Inkqubo yeHawaiʻi Safe Travels, efuna iimvavanyo zabahambi abangagonywanga.
Isigunyaziso semaski sangaphakathi;
Ugonyo okanye iimfuno zovavanyo kubasebenzi bakarhulumente kunye nabasebenzi basenqini; kwaye
Ugonyo okanye iimfuno zovavanyo lweekontraka kunye neendwendwe kumaziko karhulumente.
"La manyathelo asebenza ekuvuseleleni ishishini lethu labatyeleli ngexesha elifanelekileyo, kunye nenqanaba lokugonya lelizwe lethu libekwe phakathi kwelizwe, kunye nokhuseleko lwezempilo lwabahambi basekhaya olufunwa yinkqubo yaseHawaii yoHambo oluKhuselekileyo. Izithintelo ezilungisiweyo zomdibaniso ekufikeni kwamanye amazwe kunye nokuqhubekeka kwesigunyaziso semaski sangaphakathi saseHawaii kubonelela ngokhuseleko olongezelelweyo, utshilo uMongameli we-Hawaii Tourism Authority (HTA) kunye neGosa eliyiNtloko lesiGqeba uJohn De Fries.
Ukongeza kwisibhengezo sanamhlanje esivela kwiRhuluneli, uSodolophu waseHonolulu uRick Blangiardi ubhengeze ukuphakanyiswa kwemida yomthamo kunye neemfuno zokuncitshiswa kwezentlalo kwiminyhadala e-Oahu, isitshixo sokuphinda kuqaliswe iintlanganiso kunye neendibano kwiZiko leNgqungquthela laseHawaii kunye neendawo ezahlukeneyo zokuchithela iiholide.